केन्द्रीय सदस्य हुँदा कांग्रेस छोडेका गच्छदार ११ वर्षपछि उपसभापति
Friday, March 22 २o७५ चैत ८ शुक्रबार
२o७५ कार्तिक २० मंगलबार| प्रकाशित १३:५६:४१
काठमाडौं– २०६४ मा नेपाली कांग्रेस परित्याग गर्दा विजय गच्छदार केन्द्रीय समिति सदस्य थिए। २०७४ असोज ३० मा नेपाली कांग्रेससँग पार्टी एकीकरण गरेका गच्छदारलाई पार्टीको कुनै जिम्मेवारी दिइएको थिएन। केन्द्रीय समितिको बैठकमा विशिष्ट आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी हुँदै आएका थिए। केन्द्रीय सदस्य हुँदै पार्टी त्यागेका गच्छदार ११ वर्षपछि पार्टीको उपसभापतिमा पदासीन भएका छन्।
असोज ३० मा नेपाली कांग्रेसमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम विलय भएको थियो। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक फोरमका तत्कालीन अध्यक्षबीच पार्टी एकिकरणको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमतिपत्रमा ‘एकतापछि नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक संरचनामा केन्द्र, प्रदेश जिल्ला नगर र गाँउसम्मका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र यसको भातृ÷भगिनी संस्थाहरुको संरचना एवं सदस्यहरुको यथोचित समायोजन गर्ने’ उल्लेख थियो।
सहमतिमा उल्लेख भएको ‘यथोचित समायोजन’ १३ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको सकेको थिएन। कांग्रेसमा पार्टी विलय गराएका गच्छदारको निरन्तरको दबाबपछि उनी आफू समायोजन भएपनि पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकतालाई भने कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन।
१३ महिनापछि एकल समायोजन
पार्टी एकीकरणको समयमा गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने अलिखित सहमति भएको थियो। त्यसैको आधारमा उनले पार्टीका फोरमहरुमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका थिए। गत बैशाखमा भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा चार घण्टासम्म आफ्ना गुनासा सुनाएका थिए उनले। बैठकमा कांग्रेसलाई गरेको योगदान सहित पृष्ठभुमिको वकालत गरे।
केन्द्रीय कार्य समितिको बैैठक लगत्तै सभापतिले बहुमतको आधारमा निर्णय गराएर विमलेन्द्र निधीलाई उप सभापति बनाइयो। विधानको कारण देखाएर गच्छदार उपसभापति हुन सकेका थिएनन्। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई भातृ संस्थाहरुमा समायोजन नगरेपछि गच्छदार रुष्ट थिए।
चार महिनाअघि पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी भएको एक कार्यक्रममा गच्छदारले आफूसँगै आएका कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी नदिए कार्यकर्तालाई काठमाडौं बोलाउने चेतावनी दिएका थिए। गच्छदारले एकपछि अर्को चर्को दबाब बढाएपछि पार्टी नेतृत्व जिम्मेवारी दिन सहमत भएको हो।
प्रक्रिया लत्याइएको भन्दै आपत्ति
नेपाली कांग्रेस विधानको धारा ५० मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। विधान अनुरुप गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई हुँदैन। तर, बन्देज फुकाउने अधिकार भने हुन्छ। विधानले बन्देज लगाए त्यसको फुकुवा गर्ने निर्णय त्यसलगत्तै हुने महासमिति बैठक वा महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्य समितिले पेश गर्नुपर्छ।
मंगलबारको बैठकमा ‘राजनीतिक आवश्यकता र निर्णय’को आधारमा गच्छदारलाई उपसभापति बनाइएको बताइएको छ। महामन्त्री डा शंशाक कोइरालाले उपसभापति बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पेस गरेका थिए। प्रक्रिया मिचेर उपसभापति बनाउन लागिएको भन्दै संस्थापन इतर समूहले आपत्ति जनाएको थियो। उनलाई उपसभापति बनाउन हुन्न भन्ने पक्षमा कोही पनि थिएनन् तर प्रक्रियागत रुपमा उपसभापतिको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा केही नेताले जोड दिएका थिए।
बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसीले मनोनित गर्ने विधीको विरोध गरे। केसीले तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएका सबै नेता कार्यकर्तालाई समग्रमा समायोजन गर्ने गरी कार्यदल बनाउन आग्रह गरेका थिए।
देउवा पक्षको अाग्रह
सभापतिले इतर समूहको सुझाव मनासिव भएपनि अपवादका रुपमा गच्छदारको प्रसंग बुझिदिन आग्रह गरेका थिए। गच्छदारलाई उपसभापतिको पदमा मनोनित गरेपनि अन्य नेता कार्यकर्ताको समायोजन टुंगो लागेको छैन। अन्य नेता तथा कार्यकतालाई जिम्मेवारी दिनका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ।
अर्थविद् प्राध्यापक डा दाहालको निधन
आँखा चिम्लेर सरकारको विरोध, खोल्दा जताततै विकास र समृद्धि : प्रधानमन्त्री
८ महिनामै विदेसिए ३ लाख ३२ हजार युवा
तीन तहकै सरकारले मिलेर काम गर्छ : उपप्रधानमन्त्री पाेखरेल
भन्सारका अधिकृतको आम्दानी ७ वर्षमा ३ करोडभन्दा धेरै, स्रोत नखुलेपछि भ्रष्टाचार मुद्दा
भारतीय विदेश सचिव गोखले नेपाल आउँदै
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित
राष्ट्रियसभा : संसदमा प्लाष्टिकका गिलास प्रतिबन्धदेखि मुस्लिम आयाेगका अध्यक्षको विवादसम्म
१४ तस्बिरमा हेर्नुस् गिरिजाप्रसाद कोइराला
उपाधि भिडन्तको पहिलो हाफमा नेपाल र भारत बराबरी
राजधानीमा पूर्वराजदूतकाे रहस्यमय हत्या : ७ महिना बित्यो, के गर्दैछ प्रहरी?
ओलीका सल्लाहकारलाई व्यापारीको फोन, मन्त्रीमा नयाँ अनुहार को–को?
निर्मला हत्या प्रकरण : दिलीपसिंह विष्टलाई छुटाउन एसपीलाई पत्रकार भण्डारीको यस्तो मेसेज
अनुहारमा चाँयापोतो आउने कारण र बच्ने उपाय
यी हुन् अमेरिकामा प्रचण्डविरुद्ध उजुरी गर्ने श्रेष्ठ
विवादित अन्सारीको सपथ : संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि प्रश्न
प्रहरी धरपकडमा वैधानिक सरह क्षतिपूर्ति पाउँदै कोरियाका अवैधानिक विदेशी कामदार
देउवाको राजनीतिक तमासा : ‘कोइराला विरोधी’ कार्डमा अझै आशा?
निर्मला हत्या प्रकरण : अमेरिका र जापानले मानेनन् डिएनए परीक्षण गर्न
प्रचण्डविरुद्ध अमेरिकामा उजुरी [आरोपपत्र सहित]
रेखा थापाले किनिन् क्रिकेट टिम, बनिन् काठमाडौं सुपर च्याम्पियन्सको मालिक
प्रचण्ड र राउतको तुलना हात्ती र हात्तीछाप चप्पल जस्तै : बाबुराम भट्टराई
देशभरका यी ५५ अस्पताल जहाँ मिर्गौला रोगको उपचार र निःशुल्क डायलाइसिस सेवा पाइन्छ
विप्लव समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय
बुँदा नम्बर २ को दायरा
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण-२ : भाटभटेनीले ३६ फर्मबाट खरिद गर्थ्यो नक्कली बिल
समृद्धिको नारा दक्षिणपन्थीको टेक्ने लौरो भएको छ
स्वदेशी उद्योग धरापमा पार्न दूधमा विदेशी लगानी : सुमित केडिया [अन्तर्वार्ता]
टीकापुर काण्डमा सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद
शिशिर ढकाल- अस्ट्रेलिया